Bolgaria: Manolotra Fampiantranoana Ho an’Ireo Japoney Niharan’ny Horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Bolgaria: Manolotra Fampiantranoana Ho an'Ireo Japoney Niharan'ny Horohorontany
Voadika ny 20 Marsa 2011 17:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, 日本語, македонски, English
Ity lahatsoratra ity dia iray amin'ireo tatitra manokana ataonay momba ny Horohorontany Japana 2011.
Lasa loza iraisan'ny manerantany ny horohorontany tany Japana. Voaporofon'ny fahavononan'ireo vahoaka avy amin'ny firenena sy kantinanta samihafa te-hanampy ireo tra-doza tamin'ilay fihetsehana, izay nahafatesana ain'olona an'arivony maro.
Te-hampiantrano ireo Japoney niharan'ny horohrontany ry zareo Bolgara
Andro vitsy lasa izao dia misy vondrona iray ao amin'ny Facebook noforonin-dry zareo Bolgara mihetsika fatratra hanao ezaka fanampiana ireo niharan'ny horohorontany. Olona vitsy no nanomboka azy ity, saingy niakatra ho 900 ny mpikambana tao anatin'ny fotoana fohy monja.
Varsenia Stoyanova, mpikambana amin'io vondrona io, dia nanoratra hafatra, manolotra fomba mivaingana hanampiana amin'ny alalan'ny fampiantranoana fianakaviana Japoney:
Hafatra ho an'ireo mpikamvana ao amin'ilay vondrona
Ireo rehetra afaka manampy, iangaviana handefa hafatra, manazava ny karazana fampiantranoana azonao omena ireo Japoney tratry ny voina voajanahary – efitra iray, trano iray, toerena fisindàna, trano fandraisam-bahiny sns… Amin'io fomba io dia ho afaka manangana lisitra isika, izay hatolotra an-dramatoa Kristalina Georgieva sy ny Masoivoho Japoney.
Satria ilay fandraisana andraikitra dia mikendry indrindra hampahafantatra mazava fa vonona hanampy amin'ny fampiantranoana ireo Japoney ny Bolgara, iangaviana ianareo mba hanome ny isan'ny olona azonareo raisina, tsy ilaina ny manome ny mombamomba sy ny faritra misy ilay toerana.
Misy fanehoan-kevitra maherin'ny 50 tamin'ity lahatsoratra ity, miresaka ny momba ny fampiantranoana sy ny fanazavazavana izay mety azon'ny Bolgara tsotra atao ho fanampiana.
Tahaka izay efa nambarako, manana ny ho enti-manana ara-bola ny vahoaka Japeney. Mila fotsiny manondro ny toerana ny governemanta Bolgara, ny tany azo anaovana fananganana vonjimaika, toeram-ponenana azo afindrafindra (caravanes…) azo ametrahana ireo vahoaka avy any Japana ireo.
Tokony hovahan'ny governemanta Bolgara io olana io, fa tsy ny fianakaviana Bolgara tsirairay. Amin'izao fotoana izao, ny tena maika, fitsinjarana faobe ny tany hanaovana fanorenana vonjimaika no ilaina. Misy ny olona mila tany, ny ankoatra izay dia ananan-dry zareo an'arivo heny, raha ampitahaina amin'ny fianakaviana Bolgara salantsalany.
Nina, Isika no fanovana. Tsy ny mpanao politika no hahavita izany samirery. Ary ho an'ny vondrona, ny sosokevitra, sns.., mihevitra aho fa tokony hosoritantsika ny halalin'ny olana sy ny toe-draharaha ao Japana amin'izao fotoana izao, mba hivoaka mazava tsara ny tiantsika hahatongavana. Ekena, mbola ety am-piandohana isika, saingy farafaharatsiny asehontsika mazava fa misy ny olona vonona hanampy.
Afaka manome trano isika (ho an'olona 6) aty an-tananan'i Vodolei ato amin'ny faritr'i Veliko Tarnovo, ary efitra natao ho an'olon-droa ao amin'ny toerana fisindana / fialantsasatra ao akaikin'i Balchik [toerana fisindàna Bolgara any manamorona ny Ranomasina Mainty ].
Afaka manome trano iray aho ao an-tananan'i Alfatar, faritr'i Silistra [tanana any avaratr'i Bolgaria]. Misy tokotany io, ary zaridaina malalaka sy toerana fametrahana fiara. Miosy izay ilaina rehetra ao an-trano, lehibe, tsara toerana ary afaka mandray fianakaviana maro anaka.
Ry namama malala, aoka hasehontsika ny fahavononantsika hanampy ireo mila izany, tsy asiana fitiavantena, satria masina ny zavatra ataontsika ary noho ny maha olona. Hanampy azy ireo sy isika koa anie Andriamanitra!!!
Hatreto, Bolgara 43 no nanome toeram-ponenana ho anà Japoney 200 tsy mila tambiny!!
Ity misy lahatsary iray, noforonin'ny vondrona Facebook iray, mikasika an'i Japana sy ny filàna fanampiana:
Ao amin'ny Facebook taha ny ao amin'ny YouTube rahateo.
Ireo Bolgara dia nanomboka fanangonan-tsonia tao amin'ny Change.org, mangataka ny mba hahamaro ireo olona mitondra fanampiana. Hatreto dia efa 400 no nanao sonia azy io. Hafatra misarika ny fifantohan-tsaina ho any amin'ilay resaka koa no miely any anaty Twitter any:
Fanampian'ny Bolgara ho an'i Japan – afaka manampy ny tsirairay http://bg.kolektiva.net/sofia/extra/dari-na-zhertvite-na-sendaj-zemetresenieto-japan.html
Ny Vokovoko Mena Bolgara dia tototry tolotra ho fanampiana an'i Japana http://bit.ly/gcYqeT
Nandefa lamba firakotra i Bolgaria, fa tsy mpamono afo akory ho any Japana: Nandefa lamba firakotra i Bolgaria ho fanampiana amin'ny maha olona […]
Fanampiana ho an'i Japana: http://www.facebook.com/event.php?eid=207511772594419&notif_t=event_invite
17 ora izayBorkina Faso